Saafi Films - News: Addis Ababa: Shacabka Itoobiya oo maanta u dabaal dagaaya Happy New Year Sanadka 2005
Addis Ababa: Shacabka Itoobiya oo maanta u dabaal dagaaya Happy New Year Sanadka 2005
Waxaa maanta oo Talaado ah Shacabka Itoobiya iyo Dowladda dalkaasi ay u dabaal dagayaan Happy News Year sanadka 2005, iyagoo magaalooyinka waa weyn iyo gobolada qaar laga wado fantastiyo balaaran.
Itoobiya waxa ay horaan u diiday in ay la socoto Taariiqda Yurub, maadaama ay ku andacoonayaan in muddo 8 sano ah ay ku jireen dagaalo ba�an, islamarkaana 8-daas sano ay dib ugu laabanayaan.
Shacab badan ayaa isugu soo baxay magaalada Addis Adis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya, iyagoo wata Boorar ay ku qoran yihiin� SANAD CUSUB REER ITOOBIYA � iyo Calanka dalkaas oo meel kasto la dhigay.
Shacabka Itoobiya ayaa maanta aad ugu faraxsan sanadka cusub ee 2005, iyagoo sidoo kale aysan ka xumeen Taariiqda adduunka oo ay ka dambeeyaan, inkastoo ay jiraan wadamada qaar oo Taariiq u gooni ah leh.
Ra�iisul Wasaaraha Cusub ee Itoobiya ayaa lagu arkay Telefishinka qaranka dalkaas, isagoo u Hambalyeeynaaya Dhammaan Shacabka Itoobiya ee u dabaal dagaaya sandka cusub ee Happy New Year-ka.
Wadanka Talyaaniga ayaa hadda ka hor isku ayay in ay gumeystaan Itoobiya lakin Shacabka Itoobiya ayaa dagaal in muddo ah socday kala hortagay Gumeystihii Talyaaniga ee rabay in ay Gumeystaan Ithiopia.
4,955,443 unique visits